Axmed Madoobe “Waa wax Lala Yoobo Inaan Weynay Saanadii Hubka Ee Dowladdu Dhexe Hesho, Shabaabna ay Helayaan” | Awdalmedia.com
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa ku eedeeyay dowladda Federaalka inay ka gaabisay hoggaamintii howlgalada ka dhanka ah Al-Shabaab, si looga xoreeyo deegaanada ay maamulaan.
Axmed Madoobe ayaa sheegay in hubkii iyo rasaastii dowladda Soomaaliya soo gaaray aanay la siin maamulada, taas bedelkeed ay Al-Shabaab helayaan.
Waxaa uu tusaale u soo qaatay illaa 173 Konteenar hub iyo rasaas ah oo lagu soo iibiyay dhaqaale uu bixiyay Sacuudiga aan wax laga siin.
“Illaa 173 Konteenar ayaa taalla oo ah hub iyo rasaas lagu soo gaday dhaqaale uu Sacuudiga bixiyay, lix maalin kaddib markii howl galka bilowday dowladda waa na siin weyday hubka iyo rasaasta, waa wax aad u qariib ah in wixii aan annaga weynay inay helayaan Shabaab oo iyaga gacantooda soo galeyso, anagana aan la’nahay”ayuu yiri Axmed Madoobe oo ka hadlayay kulan uu la qaatay Guddiga ka socda Aqalka Sare ee ku howlan xalinta khilaafka dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada.
Axmed Madoobe ayaa sheegay in arrimaha qaar ee kala dhaxeeya iyaga iyo dowladda Federaalka ay ka dhalatay tabasho badan iyo cabasho ay dowladda ka hoos-qaadi weyday, isagoo xusay in markii wixii lagu heshiiyay la fulin waayay ay keentay inay dalbadaan in la helo cid saddexaad oo kala qeyb gasha shirka iyaga iyo dowladda Federaalka.
Khilaafka u dhaxeeya dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada ayaa heerkii ugu xumaa gaaray, waxaana maamul goboleedyada ay hakiyeen wada shaqeyntii kala dhaxeysa dowladda Federaalka, iyagoo dalbaday in la helo garab saddexaad oo dhex dhexaadin ka noqda iyaga iyo dowladda Federaalka, inkastoo Ra’iisul Wasaare Kheyre uu ku gacan seyray in garab 3aad oo ajnabi ah inuu u kala gar-qaado dowladda iyo maamul goboleedyada.